SIDA LOO QABOOJIYO QABOOJIYAHA JIILAALKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo qaboojiyo qaboojiyaha jiilaalka qaboojiyaha
Qalabka casriga ah wuxuu u ogolaanayaa inuusan si dhakhso ah u dhicin alaabooyin kala duwan, laakiin sidoo kale in la ilaaliyo wakhti dheer iyadoon lumin dhadhanka iyo tayada caafimaad leh. Marka jirku uu u baahan yahay fitamiino (xilliga jiilaalka iyo xilliga gu'ga), diyaargarowgaa oo kale ayaa soo galaya. Qaboojiyaha qaboojiyaha ah wuxuu hayaa dhammaanba dhammaan hantidiisa faa'iido leh iyo fiitamiino lumay geeddi-socodka karkarinta. Sidaa darteed, kuwa doonaya in ay gacanta ku haystaan ​​kaydinta vitamiin, sheekadayadu waxay noqon doontaa mid xiiso leh oo faa'iido leh.
Haddii aad ku guulaysatay inaad soo qaadato qadar badan oo ka mid ah badeecadan ugu qiimaha badan, waa inaadan u dhaq-dhaqaaqin sida ay u socoto nidaamka caadiga ah (cunto kariye, macaanka, casiir, iwm.). Waxaa jira hab gaar ah, sida loo ilaaliyo qaboojiyaha cusub, iyo isla waqtigaas si loo ilaaliyo hantidooda - qaboojiyaal karti leh. Midhaha ugu fiican ee lagu keydiyo waa kuwa la goosto 2-3 saacadood ka hor goosashada. Waxay sida ugu badan ee suurtagal ah u ilaali tayada iyo tayada waxtar leh. Cranberry (ama liin waqooyiga) waxaa ku jira nafaqooyin badan:
acids: quinic, ursolic, ascorbic, citric, benzoic, malic;
pectins iyo glycosides;
fitamiinada PP, K, kooxda B.
Waa muhiim! Xeerka kaliya ee waa in la raaco marka midho goosashada si loo ilaaliyo fiitamiinada - iyaga lama karayn karo.
Diyaarinta berry ka hor inta aan la keydin
Ka hor inta aan la jarin miraha waxaa lagu kala soocayaa:
kala soocay caleemaha;
iska tuur qashinka nadiifka ah iyo qashinka;
dooro guud ahaan, unugyada aan la jajabin (miraha la jajabiyay ayaa la gelin karaa casiirka);
qaan-gaadhka oo dhan lama wada tuurin.
In gaaban, kaliya berry buuxa oo kufilan yihiin ku habboon goosashada.
Waa muhiim! Cranberries waxaa ku jira dabeecada dabiiciga ah. - benzoic acid, taas oo hooseysa kobaca bakteeriyada.
Ka dib markii la doorto nuqullada ugu quruxda badan oo tayo sare leh, waa la dhaqaa oo la qalajiyaa. Si fiican ugu qallaji waraaqaha ama shukumaanada.
Siyaabaha lagu xakameynayo: wax-barid talaabo tallaabo ah
Si aad u heshid midhaha cusub ee xilliga qaboobaha, muhiim maahan inaad iibsato qalab gooni ah. Xiliga tayada sarreeya oo degdeg ah ayaa si fiican u shaqeeya qaboojiyaha casriga ah.
Ma taqaanaa? Dalka Ruushka, qaboojiska, oo la soo goostay ka hor inta aanuu barafoobin, waxaa ka buuxsamay biyo nadiif ah, waxaa lagu keydiyay tuubooyin alwaax ah oo miisas ah. Sidan oo kale, berry wuxuu awooday inuu sii wado ilaa guga.
Waxaa jira farsamooyin dhowr ah oo loogu talagalay qaboojiyaha daaqada guriga, laakiin ugu fudud oo ugu waxsoosaarku waa qashin badan. Tani, tayada-tayo sare leh (bislaado, adag) (pre-diyaarinta) ayaa lagu dhigaa bacaha waxayna u dirtaa qaboojiyaha.
Sidoo kale jiilaalka waxaad ku xakamayn kartaa: miro, khudradda, currant, tufaax, qolof, qufac, lafaha iyo blueberries.
Waxaad isticmaali kartaa qaab kale oo lagu yareeyo khudradda cusub: beruudyada waxaa lagu dhajiyaa buluug ama saxaarad waxaana loo diraa 2-3 saacadood barafeeyaha. Ka dib markaa, qaboojiyaha waa la saaraa oo lagu xiraa baakadaha ama weelasha, oo markaa dib loogu celiyo qaboojiyaha. Habkani waa mid wax soo saar badan, maxaa yeelay berry wuxuu ka dhigi karaa casiir iyo wadajir ah, taas oo ah, lumiso muuqaalkooda "suuqa la iibsan karo".
Kuwa aqoonta u leh inay qaboojiso qaboojiyaha jiilaalka sonkorta leh, had iyo jeer isticmaal habkan. Nidaamkani wuxuu ka duwan yahay inuu ka dhigo midhaha berry cusub oo ah in midhaha hore loo buuxiyey sonkorta ama lagu shubay sonkorta sharoobada. Noocida noocan ahi waxay u ogolaanaysaa inaanay ilaalin kaliya qaabka dabiiciga ah ee midhaha, laakiin sidoo kale xoojinta dhadhanka.
Waa muhiim! "Qabow" macaan ayaa ku habboon beeraha casiir leh iyo xayawaan geedka.
Sida caadiga ah, waxaa lagu talinayaa in lagu keydiyo miraha barafoobay 8-10 bilood. Hase yeeshee bacaha waa berrito gaar ah. Haddii lagu xakameynayo sida waafaqsan sharciyada oo idil, markaa heerkulka -18 ° C waxaa loo kaydin karaa laga bilaabo 1 sano ilaa 3. Biilka waa in lagu keydiyaa waxyaabaha sida kalluunka iyo hilibka. Waxay awoodaan inay "abaalmariyaan" alaabada ay la socdaan dhadhanka.
Isla mar ahaantaana waxaa lagama maarmaan ah in lala socdo sharafta xirmada si ay miraha u lumiso qoyaanka. Dib-u-qaboojinta berry cusub ayaan lagula talin - ma aha oo kaliya luminta dhadhanka iyo bandhigidooda, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa waxyeello caafimaadkooda. Haddii ay dhacdo in miro la jarjaray si dhakhso ah looma isticmaalo, waxaa wanaagsan in lakulo daaweynta kuleylka kadibna kaddibna qaboojiso.
Ma taqaanaa? Xilliga Casaanka ee Ruushka waxaa loo yaqaan kaliya sida "boqor ah". Iyo Maraykanka, waa wax caado ah in ay u adeegaan maalinta Thanksgiving.
Miyaan u baahanahay in aan jabiyo
Cunto karinta qaar ka mid ah (badanaa daaweynta kulaylka) uma baahna kahortaga jaranjarada. Laakiin for saxamada badan, berry la qaboojiyey ayaa si fiican loo diyaariyey ka hor. Oo samee sax. First of dhan, hawadu waa in aan loo oggolaan in ay soo galaan iyo casiir ayaa laga yaabaa inay soo baxaan.
Habka ugu jaban uguna dhaqsaha badan ee la jarjarayo waa in la dhigo badeecada hawada hawada qaada oo hoos u dhig 30-45 daqiiqo biyo qabow. Laakiin qaabka ugu fiican waa in lagu wareejiyo miraha la qaboojiyey qaboojiyaha. Run, waxay qaadan doontaa wakhti intaa ka badan (qiyaastii 7 saacadood), laakiin waxay sii hayn doontaa waxtar badan oo dhadhan tayada.
Ma taqaanaa? Haddii aad u baahato inaad jabiso qaboojiyaha, cuntada la qaboojiyey waxaa laga ilaalin karaa kuleylka iyaga oo ku duubaya buste.
Qabooillada barafaysan oo keliya ma caawineyso inay kor u qaaddo difaacidda jiilaalka, laakiin sidoo kale waa kala duwanaan kartaa suxuunta haddii aad ogtahay waxa aad karisaan karo.
Salad iyo firiley. Miraha waxaa si fudud loogu dari karaa karootada ama karootada. Waxa kale oo ay noqon karaan qayb muhiim u ah saladhka fitamiin (oo ku salaysan kaabajka, digaagga, laalaabka, mooska, iwm.).
Suxuunta iyo dharka. Xilliga qaboobaha waxay sameeyaan qurux badan, suugo dhadhan leh oo hilib, kalluun iyo macmacaan.
Morsy, compotes iyo jelly. Cabbitaanka cusbada waxay ku fiican tahay xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga jiilaalka. Intaa waxaa dheer, xilliga qaboobaha, waxay yihiin ilo tayo leh oo fiitamiin ah iyo firfircooni.
Dareemidda for pies, muffins iyo casseroles jiis. Cranberry waa doorashada ugu fiican. Intaa waxaa dheer, suxuunta noocaas ah waxaa loo diyaariyaa si dhakhso ah.
Macmacaanka Haddii alaabada la kariyay ay u eg tahay cunto adag, markaa waxaad ka dhigi kartaa macmacaan fudud oo ka soo baxaya qaboojiyaha.
Macmacaanka ugu wanaagsan waxaa lagu sameyn karaa miraha iyo nooca berry sida pear, khudaarta, currant, strawberry iyo yoshta.
Ka dib markaad akhrisato maqaalkeena, waxaad baratay sidii loo xakameyn lahaa karoon qiimo leh, iyada oo la ilaalinayo tayada caafimaadka leh, dhadhanka iyo muuqaalka. Adigoo isticmaalaya talo-siin, waxaad awoodi doontaa inaad ku farxo dadka aad jeceshahay dhammaan jiilaalka iyaga oo leh suxuunta dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh leh berry.